Universal Online TV | आइतवारदेखि कसरी लिने अनलाईनबाट श्रम स्वीकृति ? के - के कागजात चाहिन्छन् ? आइतवारदेखि कसरी लिने अनलाईनबाट श्रम स्वीकृति ? के - के कागजात चाहिन्छन् ?
प्रकाशित मिती: १ माघ २०७८, शनिबार
वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले आइतवारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ ।